ညီနေမင်း: ကွန်ပျူတာတစ်လုံး လုပ်ဆောင်မှု မြန်ဆန်အောင် ဘာတွေ လုပ်သင့်သလဲ .
ကွန်ပျူတာတစ်လုံး လုပ်ဆောင်မှု မြန်ဆန်အောင် ဘာတွေ လုပ်သင့်သလဲ .
ဒါကတော့ ကွန်ပျူတာ သုံးတဲ့လူများအားလုံး သိစေချင်လို့ ကျွန်တော် ရေးလိုက်တာပါ . မေးထားတာလဲ ညီအစ်ကို တော်တော်များနေလို့ပါ . ဒီနေ့တော့ ထူးထူးခြားခြား ညီလေးတစ်ယောက် ကျွန်တော့်ကို လာပြီးတောင်းပန်လာပါတယ် . ကျွန်တော် ဘယ်သူ့ကိုမှ တိုက်ခိုက်တာ စော်ကားခဲ့တာ မရှိပါဘူး . ကိုယ့်လမ်းကို လျှောက်နေတာပါ . ဒီ့အတွက် ကိုယ့်လိပ်ပြာကို သန့်ပါတယ် . ကျွန်တော့်ဆိုက်ကို လာလာပြီးအော်ပြီး အမြင်မတော်တဲ့ စကားလုံးများနှင့် လာလာရေးနေတာပါတဲ့ . အဲ့ဒီ့အတွက် ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော်ရှက်ပြီး လိပ်ပြာမလုံတော့လို့ ပါတဲ့ . ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ ဘာမှကို မရှိပါဘူး . လာဆဲတဲ့ သူတွေအပေါ်မှာလဲ ဘယ်လိုမှ ခံစားချက်ကို မထားတော့တာပါ . သူလဲ သူဝါသနာပါလို့ လာဆဲတာ . ကိုလဲ ၀ါသနာပါလို့ ရေးနေတာပါ . အဲ့ဒီ့အတွက်တော့ နောင်တမရပါဘူး . အခုလို လာပြီး တောင်းပန်တဲ့ညီလေးကိုလဲ အစ်ကို ဘယ်လိုမှ သဘောမထားပါဘူး . ဒီပို့စ်ထဲမှာ ထည့်ရေးလိုက်တဲ့ အတွက်တော့ အစ်ကို့အပေါ်မှာ တစ်မျိုးမထင်စေချင်ပါဘူး . ကဲ ကွန်ပျူတာတစ်လုံး မြန်ဆန်အောင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ (၁) မိမိကွန်ပျူတာမှာ virus စစ်တဲ့အချိန်နဲ့ တစ်ခြားအချိန်တွေမှာ antivirus ကြောင့် စက်လေးနေတတ်ပါတယ် . အဲ့ဒီ့အတွက် ပေါ့ပါးပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ kaspersky လို antivirus program ကို သုံးသင့်ပါတယ် . (၂) မိမိကွန်ပျူတာဟာ program တွေကို ဖြုတ်လိုက် ပြန်တင်လိုက် ဖိုင်တွေကို ဖျက်လိုက် ပြန်ထည့်လိုက် လုပ်နေတာ ဆိုရင် အဲ့ဒီ့စက်ဟာ ကြာလာတာနဲ့အမျှ စက်ဟာလေးလာမှာပါ . ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုရင် အဆိုပါ program တွေကို ဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ program uninstall လုပ်တုန်းက program တော်တော်များများဟာ အကုန်လုံးကို မဖျက်သွားပါဘူး . တစ်ချို့ temporary files တွေ ကျန်နေခဲ့ပါတယ် . အဲ့ဒီ့ဖိုင်တွေဟာ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးအတွက် မလိုအပ်ပါဘူး . အဲ့လိုဖိုင်တွေ များလာတာဟာ HDD အတွက် မကောင်းတဲ့အလားအလာပါ . အဲ့ဖိုင်တွေကို ဖျက်ပစ်ရပါမယ် . (၃) မိမိ HDD မှာ system error ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ bad sector တွေကို မကြာခဏဆိုသလို fix လုပ်ပေးရပါမယ် . တစ်ခါတစ်လေ bad sector တွေများလာတဲ့အတွက် partition တောင် ပိုင်းမရတဲ့အခါမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ် . တစ်လကိုတစ်ကြိမ်လောက်တော့ bad sector ကို fix လုပ်ပေးပါ . (၄) နောက်တစ်ချက်က File တွေကို ပြန်ပြီး စီပေးပါ . ဘာ့ကြောင့် ဖိုင်တွေပြန်စီရတာလဲဆိုရင် ကျွန်တော်ဥပမာ တစ်ခုပေးပါ့မယ် . အတွဲ (၁၀)တွဲရှိတဲ့ မီးရထားတွဲတစ်တွဲမှာ ဆိုပါစို့ဗျာ . အဲ့ဒီ့အခန်းတွေကို ဖိုင်တွေလို့ သဘောထားလိုက် . မိမိက အတွဲ(၁) နဲ့ (၂) မှာ ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ယူသုံးလိုက်မယ် (ဖိုင်ဖျက်လိုက်တယ်). အဲ့ဒီ့အတွဲ(၁) (၂) ထဲမှာ ဘာမရှိတော့ဘူး . ဗလာကြီးပဲကျန်သေးတယ် . နောက်ထပ် အသစ်လာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို အတွဲ(၁)နဲ့ (၂) မှာ မထားဘဲနဲ့ ဟိုးနောက်တွဲမှာ သွားထားမယ်ဆိုရင်(ဖိုင်အသစ်တွေထည့်မယ်) မိမိကလိုအပ်လို့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်ယူမယ်ဆိုရင်(ဖိုင်ကိုခေါ်သုံးမယ်၊ ဖွင့်မယ်) ဟိုးနောက်တွဲကနေ သွားသွားပြီးယူနေရတာဆိုတော့ အချိန်ကြာတာပေါ့ . မဟုတ်ဘူးလား . အဲ့ဒီ့တော့ အဲ့ဒီ့ရထားတွဲ မြန်လာအောင် ဘာလုပ်ရမလဲ၊ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်ပစ်မယ်၊ ရောင်းပစ်မယ်(ဖျက်ပစ်သည်) ပြီးရင် အဲ့ဒီ့လွတ်နေတဲ့ အခန်းတွေထဲကို နောက်တွဲတွေထဲက ကုန်တွေကို ပြောင်းထည့်မယ် (ဖိုင်ပြန်စီလိုက်သည်) ဆိုရင် ကိုတစ်ချိန်လိုအပ်လို့ ကုန်တွေထုတ်မယ် (ဖိုင်တွေဖွင့်မယ်) ဆိုရင် နောက်အထိသွားစရာမလိုတော့ဘူး . ရှေ့ခန်းကနေ ယူလို့ရတယ်လေ . အခုလဲ ဒီသဘောပါပဲ . အဲ့တော့ ကွန်ပျူတာလေးတာ ကြာတာ၊ ဖိုင်တွေ ဟိုတစ်ဖိုင် ဒီတစ်ဖိုင်ရောက်နေလို့ပါ ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်လဲ ပါပါတယ် .
တစ်ခြားအချက်တွေကျန်ပါသေးတယ် . ဒါကတော့ လတ်တလော ပြောပြတဲ့အချက်လေးတွေပါ . ထပ်ရေးပါဦးမယ် . ဒီအဆင့် ၄ ဆင့်လောက်ကိုပဲ အခုလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ . ကွန်ပျူတာ ယခင်ကထက် ပိုမိုမြန်ဆန်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် .
နံပါတ်(၁) အတွက်ကတော့ စိတ်မပူပါနဲ့ ကျွန်တော့်ဆိုက်မှာ antivirus program ကောင်းကောင်းတွေ တင်ထားပေးပြီးသားပါ . ဒီမှာ သွားယူလိုက်ပါ .
နံပါတ်(၂) အတွက်ကတော့ ကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ ccleaner ကို အသုံးပြုပြီးတော့ မလိုအပ်တဲ့ tempory file များကို ဖျက်ပစ်လို့ရပါတယ် . Ccleaner ကို ဒီမှာ တင်ပေးထားပါတယ် .
နံပါတ်(၃) အတွက်ကတော့ Bad sector ကို ဘယ်လို Fix လုပ်မလဲဆိုတဲ့ ပို့စ်ကို ဒီမှာ ရေးထားပြီးသားပါ .
နံပါတ်(၄) ဖိုင်တွေ ပြန်စီဖို့အတွက်ကတော့ ဒီမှာ နှင့် ဒီမှာ မှာ တင်ထားပေးထားပါတယ် . အဆင်ပြေတဲ့ program နဲ့သာ ဖိုင်ပြန်စီလိုက်ပါ . window မှာလဲပါပြီးသားပါ . ဒါပေမယ့် သူက အခုတင်ပေးတဲ့ Defragment လောက်တော့ မကောင်းပါဘူး . ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုရင် အခုတင်ပေးတဲ့ Defragment program ဟာ ဖိုင်စီဖို့အတွက် သီးသန့် program ဖြစ်တဲ့အတွက် window မှာပါတဲ့ program ထက်ကောင်းတယ်ဆို တာတော့ ငြင်းလို့မရပါဘူး . .
နံပါတ်(၅) error များကို ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် Advanced SystemCare လိုမျိုး program ကိုလဲ စက်ထဲမှာ install လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ် . ဒါမှ မိမိကွန်ပျူတာမှာ ဖြစ်နေတဲ့ error တွေကို ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှု မြန်ဆန်လာမှာပါ . Advanced SystemCare ကို ဒီမှာ တင်ထားပေးပြီးသားပါ .
Posted by ညီနေမင်း at 1:19 PM
မောင်ဘကြိုင် December 8, 2009 at 5:39 PM
swe htut December 9, 2009 at 6:13 PM
အဝေးရောက် မြန်မာတွေရဲ့ computer အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းပေး နေတဲ့ အကောင်းဆုံး blog ဖြစ်ပါတယ်... ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်...
အချိန်ပေးပြီး လုပ်ပေးထားတာ ကို လေးစားပါတယ်...
zaw December 18, 2009 at 3:34 AM
zaymyanmar June 2, 2011 at 8:10 PM
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အကို. ကျွန်တော်ကြည့်နေကြ အကိုနာမည်နဲ့ဆိုက်ကို ၀င်လိုက်ရင်ဘာတွေကြလာမှန်မသိဘူးအကို အကိုဆိုက်ကို ခေါ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ အကိုပြောင်းထားသေးလား။
Construction Signs Set icon
2009 ရဲ့ လက်ရွေးစင် 3D-icon pack
လက်ရွေးစင် icon များ ပေါင်းစည်းခြင်း
မိမိ ip address ကို ဖျောက်ပေးမည့် Auto Hide IP 4....
hp deskjet f300 အတွက် ဖြေရှင်းချက် .
Photoshop ~~ Frame-9 ~~
Photoshop ~~ Frame-8 ~~
Photoshop ~~ Frame-7 ~~
Photoshop ~~ Frame-6 ~~
Photoshop ~~ Frame-5 ~~
Photoshop ~~ Frame-4 ~~
Photoshop ~~ Frame-3 ~~
Photoshop ~~ Frame-2 ~~
Photoshop ~~ Frame-1~~
Birds Brushes (NEW)
Photoshop စိတ္တဇ ပန်းချီလို့လဲခေါ်လို့ရတဲ့ ဗရုတ်သုတ်...
Photoshop အတွက် Lightning Effects Brushes
Photoshop Fire Brushes များ
Photoshop အတွက် Water Brushes
Photoshop ကနုတ် Brushes များ
ink cartridges တစ်ခုကို resetter မသုံးဘဲ အချိန်အကြ...
ဘာ့ကြောင့် resetter ကို သုံးကြရတာလဲ
HP LaserJet 4000 - 4050 (service)
Epson R390 Resetter
မွေးနေ့ကို ဘာ့ကြောင့် လုပ်ကြသလဲ
Printer canon iP1980 Ink Resetter
photoshop frame (၁)
phone ring tone အတွက် Audacity
Avira Premium key (until 12-16-2010)
Aiprosoft Total Video Converter v4.0.02
Auto Power-on and Shut-down 2.04
Nero v9.4.26 + New Keygen
win rar ကို Pro version အနေနဲ့ သုံးကြရအောင်
Scribd Uploader 1.0
Spyware Doctor 2010 with patch
IconWorkShop Pro 6.5
လုံခြုံမှု နံပါတ်(၁)နေရာ ယူထားတဲ့ BitDefender
error များကို ပြန်ပြင်ဖို့ Advanced SystemCare Pro...
Win Win "အစ်ကိုရေ SolidWorks 2008 software & crac...
kaspersky keys for KIS & KAV
ကွန်ပျူတာတစ်လုံး လုပ်ဆောင်မှု မြန်ဆန်အောင် ဘာတွေ လု...
Kaspersky install လုပ်မရသည့် ပြဿနာအစ AVG က